Cusboonaysiinta software – Bogga 7 – Windows – Vessoft
Rainmeter 4.1 iyo 4.2 beta
Ciyaaryahanka ayaa si tiraa songs karaoke of noocyo kala duwan. software The awoodo si ay ula qabsadaan faraxa, Isbadalo, vocals iyo indices kale oo isugu darey muusikada.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in la abuuro, loona beddelo subtitles faylka fiidiyowga. Codsiga wuxuu taageertaa qaabab badan oo hoos yimaada oo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo dejiso codka codka.
software A caan ah si aad u nadiifiso iyo tayadoodii nidaamka. software The kuu ogolaanayaa inaad si loo soo saaro xogta diiwaanka iyo nadiifiso taariikhda hawlaha internet-ka.
Skype 8.25.0.5 iyo 7.41.0.101
Bedelaadaha sawir qaadayaasha
العربية, Français, Español...
software The si ay u sameeyaan liisaska hawsha iyo qorsheeyo joogto ah maalin kasta. Codsiga ku siinayaan shaqada la documents of qaabab loo jecel yahay iyo waxa ku jira oo kala duwan.
software waxaa loogu talagalay in gurmad ah database ee 1C ah: software Enterprise, files shaqsi ama database-SQL.
Kani waa barnaamijka daabacaadda, naqshadeynta iyo jarista noocyada kala duwan ee garaafyada adigoo isticmaalaya cutubka vinyl ama goynta qalabka.
WonderFox DVD Ripper 11 Pro iyo Speedy
Software-ka si loogu bedelo DVD-ga fiidiyooga dijital ah ee tayo sare leh. Software wuxuu awoodaa inuu bedelo goobaha maqalka iyo fiidiyowga ee faylasha la soo saaro.
Agabka in la abuuro screenshots iyo diiwaan qaybaha kala gooni ah ee shaashadda kombiyuutarka. Sidoo kale software ka kooban editor ka dhisay-in si sanamyadooda iyo saamaynta shaqeeyaan.